Thomas Tuchel oo ku dhawaaqay in la soo afjaray khilaafkii Lukaku ee kooxda Chelsea – Gool FM
Thomas Tuchel oo ku dhawaaqay in la soo afjaray khilaafkii Lukaku ee kooxda Chelsea
Dajiye January 4, 2022
(London) 04 Jan 2022. Tababaraha reer Germany iyo kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa ku dhawaaqay in la soo afjaray dhibaatadii kala dhexeysay weeraryahanka reer Belgium ee Romelu Lukaku.
Romelu Lukaku ayaa wareysi aanan loo idmin siiyay Sky Sports Italia isagoo ka hadlay farxad la’aanta ku heysata garoonka Stamford Bridge iyo sida uu ugu raaxeysan la’yahay heykal ciyaareedka macallinka Jarmalka ah, isaga oo muujiyay inuu jeclaan lahaa inuu ku laabto Inter Milan, taasoo keentay in laacibka laga reebo liiska xiddigaha ee ka qeyb galay kulankii Liverpool.
Chelsea ayaa habeen dambe oo Arbaco ah ku wajihi doonta kooxda Tottenham Hotspur, lugta hore ee semi-finalka tartanka Carabao Cup, garoonka Stamford Bridge.
Haddaba Thomas Tuchel ayaa shir jaraa’id uu ka soo muuqday wuxuu ku sheegay in la soo afjaray dhibaatadii kala dhexeysay Romelu Lukaku, wuxuuna yiri:
“Aniga ahaan, waxaa muhiim ah inaan fahamno sawirka guud ee aan heysano, miyay ka tarjumaysaa dareenkiisa iyo mowqifkiisa guud? Taasi waa Maya.”
“Ujeedka miyeey ahayd inuu dhibaato abuuro mise inuu ka tago kooxda si loo cadaadiyo tababaraha? dabcan waxay ahayd inuu si fiican u ogaado, waana sababta aan u wada nadiifinayno hawada.”
“Waa inaan noqono dad qaangaar ah oo aan u bislaanno inaan aqbalno raaligelinta, oo aan yeelano maskax cad oo aan ugu diyaargarowno ciyaaraha soo socda.”
“Romelu wuxuu qandaraas u galay sabab, waxaana uu doonayaa inuu guulo waa weyn la gaaro kooxdiisa Chelsea, taasoo macno weyn ugu fadhida, ma saadaalin karo mustaqbalka, laakiin ma jirin wax ujeedo ah oo ka dambeeysay waxaan oo dhan ee ah inuu badesho kooxda ama uu hamigiisa beddelo.”
Ancelotti oo si RASMI ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha Real Madrid uga qeyb galaya kulanka Alcoyano ee Copa del Rey
“Difaacida Lionel Messi waa hawl aan macquul ahayn!” – Antonio Rüdiger